एउटै घट`नामा दुई स`न्तान गुमा`एकी आमाको रो`दन दे`ख्दा` कसको मन नरो`ला? (भि`डियो स`हित) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Videos/एउटै घट`नामा दुई स`न्तान गुमा`एकी आमाको रो`दन दे`ख्दा` कसको मन नरो`ला? (भि`डियो स`हित)
रोल्पा । एउटै घटनामा दुई स`न्तान गुमा`एकी आमाको रो दन देख्दा कसको मन नरो`ला ? का`खमा एक वर्षको बच्चा आमाको पी डामा संगै रोइरहेको छ । घर सानो झुपडी छ, आर्थिक अव`स्था विप`न्न यि महि`लाले एउटै घ ट ना मा दुई साना छोरा`छोरी गुमा`इन् । तीन दिन अघि रोल्पामा भएको ब म वि स्फो टमा आफ्ना दुई सन्तान विमला र विज`यलाई गुमा`एकी हुन् ।
५ वर्षको छोरा र ११ वर्षको छोरी गुमा`एकी यि महिला रुँ दै भन्छिन् ‘एउटा सानो बच्चा छ काखमा अब यो छोरालाई कसरी हुर्काउने ?’ गोठा`ला पठाएको छोराछोरी वि स्फो टमा गु`मे`पछि आमाको बेहा`ल भएको छ । ‘अब सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ गरोस्’ छिमेकीले भनिन् ।
आफुहरुले सोच्ने नसकेको घ ट ना भएपछि अहिले रोल्पमा शो क छाएको छ । सधै ति बाल`बालिका गो`ठाला जाने गरेका थिए । घरको काम सघा`उन गएका उनीहरुको ब म वि स्फो टमा परी निध`न भएको हो । उनका २ छोरा-छोरी सहित ४ जनाले ज्या`न गुमा`एका हुन् । २२ वर्षको उमेरमा ३ स`न्तानको आमा बनेकी यिनको दुई सन्तानलाई एउटै घ ट ना ले लिएर गयो ।